रात्रीबसको यात्राबारे एउटा कथाः सीट नं- १२
१५ साउन २०७३
गाडीमा चढेँ । दाहिनेपट्ट िझ्यालको सिट चौध नंको रहेछ । आˆनो सामान त्यही सिटमुनिहालेँ, केही माथी छज्जीमा राखेँ । मनमा कौतूहल जाग्यो- “अर्कौ खाली सीट कसको होला ? आइमाई होला कि लोग्नेमान्छे ? तरुनी वा तन्नेरी नै होलान कि बुढाबुढी ? तल्लो स्तरका भुत्रे झामे्र काम गर्ने ढाक्रे खालका होलान कि उच्च स्तरका स्मार्ट…? म सोच्दै बसेँ …....